फेरि कड्किए गगन थापा, प्रधानमन्त्री देउवामाथि उठाए यस्तो गम्भीर प्रश्न — Sanchar Kendra
फेरि कड्किए गगन थापा, प्रधानमन्त्री देउवामाथि उठाए यस्तो गम्भीर प्रश्न
काठमाडौँ । काँग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै स्थगित गरेर अन्य परीक्षा भने कायमै राखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यसको आधार तर्क के हो भन्दै प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन् ।
‘कोरोना महामारीको कारणले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित तर अन्य परीक्षा सञ्चालन ! यसको आधार र तर्क के हो ?’, थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा के छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू कि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वास सरकारले दिलाउनु पर्यो कि वैकल्पिक माध्यामबाट परीक्षा संचालन गर्नुपर्यो।’
सरकारले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका परीक्षा जारी रहेको छ । आइतबार बसेको त्रिवि परीक्षा सुधार तथा समन्वय समिति र प्राविधिक परिषदको बैठकले भदौ ५ गतेसम्मका परीक्षा नरोक्ने निर्णय थियो ।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा सह नियन्त्रक घनश्याम ठाकुरले अहिले सञ्चालन भई आएका परीक्षाहरू यथावत् सञ्चालन गरिने बताए ।
उनका अनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न संकायका परीक्षा हाल सञ्चालनमा छन् । केही परीक्षा भने साउन २६ गतेदेखि सुरू हुने उनको भनाइ छ । उसो त ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा समेत त्रिविको परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै अभियान चलाइएको छ ।
त्यस्तै भदौमा तोकिएको महाधिवेशन पनि लगभग सर्ने भएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक डाकेका छन् ।
आज अपराह्न ३ बजे महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा डाकिएको बैठकले महाधिवेशन सुनिश्चितता गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने एक नेताले जानकारी दिए ।
आजै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको जिल्ला समूहको भेला हुँदैछ । वरिष्ठ नेता पौडेल तथा कृष्ण सिटौला पक्षधर जिल्ला सभापतिहरुको बैठक दिउँसो ठमेलस्थित एक होटलमा बस्ने नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
बैठकले कांग्रेस महाधिवेशन समयमै गर्न वा विशेष अधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीलाई अवैध हुनबाट जोगाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइने उनले बताए ।
कतिपय जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद हल हुन नसक्दा कांग्रेसको भदौमा हुने भनिएको महाधिवेशनका कार्यतालिका प्रभावित भएका छन् । अहिलेसम्म वडा तथा पालिकास्तरको अधिवेशन समेत नभएपछि कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्ष सभापति देउवासँग रुष्ट भएको छ ।